February 2019 - Page 4 of 4 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 4, 2019 Puntland Mirror 0
Bosaso(Puntland Mirror) Manager of DP World at Bosaso port was killed by gunman on Monday morning, sources said. Paul Anthony Fermosa, a Maltese national, was shot dead by a young man armed with pistol near […]
Boosaaso(Puntland Mirror) Maamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso ayaa waxaa dilay nin hubeysan saakay oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Paul Anthony Fermosa, oo u dhashay jasiiradda Malta, ayaa waxaa toogasho ku dilay […]
February 3, 2019 Puntland Mirror 0
The United States military says it has killed 13 members of the al-Shabab extremist group with an airstrike 30 miles (48 kilometers) outside Somalia’s capital. A U.S. Africa Command statement says Friday’s strike occurred near […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in 13 xubnood oo katirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen duqeyn ka dhacday meel 48 kiilomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan […]
February 2, 2019 Puntland Mirror 0
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa manta oo Sabti ah magacaabay qaar katirsan golihiisa wasiiradda. Laftagareen ayaa horaantii bishii December ee sanadkii 2018 loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed kadib […]
Mareykanka oo sheegay in 24 maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Hiiraan
February 1, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay 24 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday gudaha Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in duqeyntu ay Arbacadii ka dhacday meel […]
US Says Airstrike Kills 24 Al-Shabab Extremists in Hiran region
The United States military says it has killed 24 al-Shabab extremists with an airstrike in Somalia. The U.S. Africa Command says the airstrike was carried out on Wednesday near an extremist camp near Shebeeley in […]
Madaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka qeybgalaya shirka hoggaamiyaasha caalamka ee Qaramada Midoobay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah u safray magaalada New York ee dalka Mareykanka si uu uga qeybgalo shirka sanadlaha ah ee hoggaamiyaasha caalamku ay ku yeelan [...]